Izimpande zokuqala zofundondalo ziseGibhithe lasendulo naseMesopotamiya kusukela cishe ngowezi-3500 kuya ku-3000 BCE.  Amagalelo abo kwezomchazazibalo, izinkanyezi, kanye nezokwelapha angena futhi abumba iFilosofi yemvelo yamaGreki yenkathi yakudala, okuyilapho kwenziwa khona imizamo emisiwe yokuqhamuka nezincazelo ezisekelwe emsukeni ongokwemvelo wezinto ezenzeka endaweni ebonwa ngamehlo. Ngemuva kokuwa koMbuso oseNtshonalanga WaseRoma, ulwazi lwemiqondo yamaGrikhi ngomhlaba lwehla eNtshonalanga Yurophu phakathi neminyaka engamakhulu amane yokuqala (eyama-400 kuya kwe-1000 CE) weNkathi Ephakathi  kepha lwalondolozwa emazweni obuSulumane ngesikhathi se- nkathi yokuChuma kobuSulumane.  Ukubuyiselwa nokuhlanganiswa kwemisebenzi yamaGrikhi nemibuzo yamaSulumane eNtshonalanga Yurophu kusuka ngekhulu le-10 kuye le-13 kwavuselela "iFilosofi yemvelo",  kamuva eyaguqulwa yinguquko yeSayensi eyaqala ngekhulu le-16  njengoba amasu amasha kanye nokusanda-kufunyanwa kwayishiya imiqondo namasiko wamaGrikhi kwangaphambili.     Indlela-su engokwesayensi ngokushesha yadlala indima enkulu ekwakhiweni kolwazi futhi kuze kwaba ngekhulu le-19 lapho izici eziningi zezikhungo nokucwephesha zesayensi ezaqala ukwakheka;    kanye nokushintshwa "kwefilosofi yemvelo" kube isayensi yemvelo. 
Isayensi yanamuhla ngokuvamile ihlukaniswe yaba amagatsha amathathu amakhulu aqukethe isayensi yemvelo (isib, ibhayoloji, ikhemistri, kanye namafiziki), efunda imvelo ngomqondo ebanzi; isayensi yezenhlalo (isib, ezomnotho, ezengqondo, kanye nezenhlalo), ezifunda abantu ngabanye nemiphakathi; kanye nesayensi ehlelekile (isib. umhluzaqondo, umchazazibalo, kanye nesayensi yekhompyutha yemibhalo), ephathelene nezimpawu ezilawulwa yimithetho. Kodwa kukhona ukungaboni ngaso linye,   ekutheni isayensi ehlelekile empeleni yakha isayensi njengoba ingasekelwe ebufakazini obungcwetile.  Imikhakha esebenzisa ulwazi olukhona lwesayensi ngezinjongo ezisebenzayo, enjengobunjiniyela ezokwelapha, zichazwa njengesayensi esetshenzisiwe.    
Ulwazi olusha lwesayensi luthuthukiswa ucwaningo lososayensi abagqugquzelwa ilukuluku ngokuphathelene nomhlaba kanye nayisifiso sokuxazulula izinkinga. Ucwaningo lwesayensi lwanamuhla lwenziwa ngokubambisana okukhulu futhi luvame ukuqhutshwa amathimba akwezemfundo, izikhungo zokucwaninga, izikhungo zikahulumeni nezinkampani. Umthelela osebenzayo ocwaningweni lwesayensi uholele ekuqubukeni kwezinqubomgomo zesayensi ezifuna ukuthonya ibhizinisi lesayensi ngokubeka phambili ukuthuthukiswa kwe imikhiqizo yezentengiso, izikhali, ukunakekela impilo, futhiukuvikelwa kwemvelo.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ufundondalo&oldid=95667" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-9 uMbasa 2022, nge-19:36.